Yekutanga yeruzhinji beta yeReeder 4 inosvika nenhau dzakakosha | Ndinobva mac
Zvaizivikanwa kuti vanogadzira Reeder ivo vaishanda pa 4 version kubva kune mukurumbira muverengi we RSS. Kunyangwe fomati ye Kuparadzirwa kuburikidza neruzhinji betas. Saka isu tinogona pakupedzisira kuwana yeruzhinji beta uye nekutanga tanga-ruoko nhau dzese.
Zvishandiso zveRSS zvinoramba zvichikodzera, kunyanya muchikamu chekutaurirana, uko ruzivo rwatinogashira kubva kune mamwe masocial network dzimwe nguva dzakakomba kana vamwe vashandisi vakavharwa. Kuti uve neruzivo nezve chikamu chakatarwa, hapana chinhu chiri nani pane kuve neRSS muverengi saReeder.
Asi ngatizivei nhau dzeReeder 4 premieres yakasviba modhi mune macOS Mojave. Iyo yazvino vhezheni ine hue mune akasiyana mavara, ichigadzirira iyo interface yemavara mutambo, sezvatinazvo muMojave. Asi mushanduro 3 hatisi kuona shanduko mune inoenderana zvichienderana nekuti tasarudza iyo masikati kana husiku maitiro.
Dzimwe novelties dzinogona kuwanikwa mu interface, kwatinowana shanduko diki. Zvino, shanduko dzakanyanya kukosha dzinowanikwa mu kunyorera chirongwa. Zvinotaridza kuti hurongwa uye dhizaini dhizaini inotsvaga cYakakwana kuwirirana pakati peMacOS neIOS. Semuenzaniso tinowana nhau mukombuta fomati, iyo yaizokwana zvakakwana pachiratidziro che iPhone.
Asi Reeder 4 inounza mamwe akakosha mabasa senge kugona kuvhura pikicha neakangoita pombi neminwe miviri paTrackpad. Iyo yekuverenga sevhisi ichapihwa naReeder 4 ichave yakavakirwa pane iyo bvumirana neICloud uye Safari playlists. Iko kushanda kwese kuchine mabugs, ayo anozonatswa pamwe nemipiro iyo vanoshandisa beta vanozivisa kuna Silvio Rizzi. Hatizive nguva dzekutakura dzeReeder 4, asi zvirokwazvo ivo vanogadzira chishandiso vanoziva kwazvo shanduko yebasa Apple News iyo inogona kuita makwikwi naReeder 4. Reeder 3 inoenderera muchitoro chemaMacOS mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Reeder 4 yekutanga yeruzhinji beta inosvika nenhau dzakakosha
Uye beta inowanikwa sei?
Hapana maMacs matsva anotarisirwa ino yakakosha Kurume